fanontaniana Emirates Fleet A380
1 taona 5 volana lasa izay #761 by Aidablu1508
Hi, manandrana manampy ny mpamaky amin'ny fonosana Emirates Fleet ao amin'ny A380 aho, fa ny fisiana dia tsy miseho na ny VC dia tsy miasa, inona no ataoko ratsy, azonao atao angamba ny manampy ahy.
Arahaba ry Nicolai
1 taona 5 volana lasa izay #762 by Dariussssss
Nisy zavatra nitranga tamiko. Izy io dia misy ifandraisany amin'ilay dikan-teny, ka fantatrao fa misy version 841 sy 861, iray amin'ny RR sy ny hafa miaraka amin'ny fitaovan'ny EA GP2700, noho izany dia tsy maintsy mandainga ianao, tsy maintsy ataonao ny fiaramanidina mieritreritra fa ny fampisehoana rehetra Ny fametrahana anao dia ny tsara indrindra. Ampiasao ny code of the skin d'études, mba hanampiana ny takelaka hafa. Tokony miasa izy io.
1 taona 5 volana lasa izay #763 by Aidablu1508
Misaotra betsaka loatra, izay niasa, nanomboka nanongotra ny voloko sy ny fantsika aho mba hahazoako miasa
misaotra anao indray
1 taona 5 volana lasa izay #780 by jck003
Andramo sy avereno download izany
Fotoana mamorona pejy: 0.598 segondra